SingForYou.net - maythingan's Channel
maythingan 's Channel
Last Login: 10-26-2013 06:44
Channel Views: 6,257
သီချင်းလေးတွေ..နားဆင်နေရရင်.လဲပျော်..ကိုယ်တိုင်ခံစားသီဆိုနေရရင်လဲ.စိတ်ချမ်းသာနေတဲ့သူပါ..ဒီမှာဆုံတွေ့ခင်မင်ရတဲ့မောင်နှမများအားလုံးကိုလဲ.အမြဲတန်းခင်မင်လေးစား.တန်ဘိုးထားပါတယ်နော်..:) CHANNEL ကိုလည်လည်လာကြတဲ့သူများအားလုံးကိုလဲ..အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ :D.
Hobbies Reading,singing,listening any kind of music,writing ,cooking,sewing,etc;
toshiba on Sep 14, 2012
အရမ်းအဆိုကောင်း၊အသံကောင်းတဲ့ စစ်ရေ.တိုရှီဘာ..လာလည်ပီးနားဆင် သွားပါတယ်။
seaindulay on Sep 8, 2012
Dear sis thank you so much for listening to my songs and i would like to feeling of singing and listening to the songs...
kawthoolaystar on Aug 29, 2012
Ma Ma May's channel ko lar leh twar dal. Tavoy thu lay par. Forever arr pay tal norr.
julypuu on Jul 25, 2012
mama yeaa channel ko leh leh lar twar dal naw ..song day leh liosten twar pi .. loue ur voice mama . berry berry sweet...
minchit on Jul 16, 2012
အေမြတဲ့အသံပိုင်ရှင်..စစ်မေသင်္ကြန်ဆီကို Bro လာလည်သွားပြီးထင်နေတာ...အခုမှရောက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်..ခွင့်လွတ်ပါ...
taungportar on May 25, 2012
အစ်မရေတောင်ပေါ်သားလေး လည်လည်လာသွားတယ်နော် သီချင်ေးတွလဲအားပေးနားဆင် သွားပါတယ်အစ်မရေ.... အားပေးနေမယ်နော်...:)
apound on May 12, 2012
အပေါင်လာလည်သွားပါတယ်...သီချင်းတွေက အားလုံးကောင်းနေတော့ နောက်တခေါက်လာပြီးနားထောင်အုံးမယ်...
abrilsoe on May 11, 2012
crystalbaby on May 10, 2012
education level ကြီးကြည့်ပြီးတော့ မမလို့ခေါ်လိုက်ပြီနော် မမ .... လာလည်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ပြန်လည် လာရောက်မွှေနှောက်လိုက်တော့မယ်နော် မမ Channel ကို ..... ;)
santimaung on Nov 30, 2011
lar lel twar the may lay yay
akyinnarsonethu on Oct 7, 2011
mange on Sep 12, 2011
မင်္ဂလာပါ ရှင့် စစ်လေးမေသင်္ကြန်ရေ .... သီချင်းမဆိုခင်လေးမှာ အမြဲအသံချိုချိုလေးနဲ့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်တတ်တာလေးကို အရမ်းသဘောကျတယ်ရှင် ... အမြဲလည်းအားပေးနေပါမယ် စစ်လေးရေ .... သူငယ်ချင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော် ... အမြဲပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေရှင် .....း))
Deih on Sep 10, 2011
သချင်းဆိုရင် အမြဲနှုတ်ဆက်စကားပြောတတ်တဲ့ စစ်သကြန်လေးရေ ပေါ်တော်မူသေးတရ်နော် ဒိတ်ဆီလည်လည်လာသွားတုန်းက မတွေ့လိုက်ရလို့ အခုလိုက်လာပါဒယ်. သချင်းတွေ သိဆို၇င်း ပျော်ရွင်ပါစေနော်. ဒိတ်
seintoe on Sep 9, 2011
Y2K on Sep 9, 2011
လည်လည်လာသွားပါတယ် မေသင်္ကြန်ရေ..သီချင်းကောင်းလေးတွေကို ထပ်မံသီဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်နော်..အမြဲအားပေးလျှက်ပါခင်ဗျား)
klnyi on Aug 25, 2011
amrith on Aug 12, 2011
လာလည်သွားပြီဗျို့။နောက်မှထပ်လာလည်အုံးမယ် မ Maythingan ရေ။
saungnge on Aug 7, 2011
လည်လည် လာသွားပါတယ် မမမေသင်္ကြန်ရေ... သီချင်းတွေ ဆိုရင်းအမြဲတမ်း ပျော်ရွင်နိုင်ပါစေး) ချင်းတွေလဲ အားပေးနေမယ်နော်
smp1 on Aug 5, 2011
pyaephyo85 on Jul 20, 2011
ကောင်းပါတယ် မမေသင်္ကြန် သီချင်းအားလုံး
tyrence on Jul 16, 2011
ဘော်ဒါကြီးရေ.. လာလည်တာ နောက်ကျသွားတယ်ဟေ့.. ဟက်ဟက်း) .. ပျောက်နေတယ်နော်.. ဆိုပါအုံးသီချင်းတွေ..း)
maylay94 on Jun 21, 2011
sis yay..song tway amyar so tar ayan yan kg tar bal..Maylay l3l l3l lar p song tway nar sin arr pay twar tal shint.. <3<3
lovememore on Jun 14, 2011
ဂျာ.....................................................အလည်လာသွားပါတယ်...ဟီးးးးးးးးးးး အိမ်ရှင်လဲမရှိဘူးးးးးးးးးး သူညားစောင့် ရတာ...မိုးတောင်ချုပ်တော့မယ်...ဟီးးးးးးးးးးး ပြန်မလာရင်....ဒီမှာပဲအိပ်စောင့်တော့မှာ...ခိခိခိခိခိခိခိ..............ဟိုးးးးးးးးးးးယားးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားသမားဆိုတော့.......အိမ်မှာ တော်ရုံသာရုံမနေဘူးထင်တယ်......ရေးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး သူပြန်လာပြီ...ထပြေးမှ.........ကယ်ကြပါအုံးးးးးး
crazy_july on Jun 11, 2011
Thanks for visiting my channel, Sis. :)
futureking on Jun 2, 2011
အနော် အနာဂတ်ဘုရင်ကြီး လာလည်သွားပါတယ် အန်တီခြူး ခစ်ခစ် .. :P မနားရသေးတာတွေတောင် နားထောင်သွားတယ်နော် ..
achitsonethu on May 30, 2011
မမ မေသင်္ကြန် ခြူးလာလည်သွားပါတယ်နော်rnသချင်းလေးတွေဆိုတာအရမ်းနားထောင်ကောင်းပါတယ် များကြီးဆိုပါအုံးလို့ပြောရင်း ထာဝရအားပေးလျက်ပါနော်
monay on Mar 17, 2011
လာလည်ပြီး သီချင်းလေးတွေနားဆင်အားပေးသွားတယ် စစ်ရေ..အဆင်ပြေပျော်ရွင်ပါစေနော်
WayYanMoe on Mar 9, 2011
အဆိုကောင်းတဲ့. အစ်မ မေသင်္ကြန်ဆီကို ပြန်လာလည်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။ သီချင်းတွေနားဆင်အားပေး သီဆိုရင်း နဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေခင်ဗျာ။
zaw-khaing on Mar 8, 2011
လာလည်သွားတယ်စစ်လေးရေ၊သီချင်းကောင်းလေးများဆက်လက်ဆိုနိုင်ပါစေ။ By the way i live in sydey , 19, harold st; NSW,guildford ,2161,Email:[email protected] par, Mb:0422405585,Arr pay nay mal ,khin tae:Zaw-Khaing,
phyothiri on Jan 29, 2011
မမေသင်္ကြန်ရေ..သီချင်းအဆိုကောင်းတဲပ အမဆီကို အလည်လာသွားတယ်နော်..မြဲပျော်နေပါစေရှင့်...ဖြိုးး....
EVERaye on Jan 3, 2011
whitekisslay on Nov 6, 2010
Hello!Mingalar par ...... ရှင်.. မမ:)))) အိမ်ကဝေးကြီးဆိုတော့ ခုမှChannel ..ှိုလာလည်ရတယ်၊ အသံချိုချိုလေးနဲ့...သီချင်းဆိုကောင်းတဲ့မမ..ကိုအမြဲအားပေးနေ ကြောင်းပါ: x:))))))))))
ehwahandy on Oct 21, 2010
ler lal thar tal naw sis....tha chi arr lone ko listen thar tal naw.....
pp01 on Sep 30, 2010
Vocal cho cho lay paing shin sis ..yae channel ko lar lal thwer par tal..all the best and cheers!!
panshwe on Sep 22, 2010
ူlar lae twar tae sis yay, nice to meet you naw.. :).. have fun at SFY
susannyunn on Sep 18, 2010
i juz come n visit to U , MAMA ... NO SONGZ R LEFT COZ I HV ALREADY LISTENED ALL OF URZ ....OKIE ?? CARRY ON !!!!!!!!...CHEERSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sattgyi on Sep 16, 2010
trooper on Sep 16, 2010
sing more song ma may...amye tan arr pay nar sin mal nor... so tae song lay twe yan kg tal...
MyuKhoe on Sep 11, 2010
မင်္ဂလာပါ.. မမေသင်္ကြန်ရေ........ သီချင်းဆိုတိုင်း မင်္ဂလာပါလို့ အမြဲပြောတတ်တဲ့ စစ်ကို မင်္ဂလာပါလို့ ပြန်ပြီး နှုတ်ဆက်ပီး ချန်နယ်လေးထဲကို အလည်ရောက်ရှိလာကြောင်းပါ....... အသံချိချိုအေးအေးလေးနဲ့ သီချင်းတွေအမြဲ ဆိုတတ်တဲ့ စစ်.... သီချင်းတွေ အများကြီး ဆိုနိုင်ပါစေဗျာ....
thant on Sep 10, 2010
Alal lar thwar tar thanks par Sis yay.............athan lay ka cho tha lo........lu lay ka lal hla mhar..........thar char tal..........thi chin tway amyar gyi.........sat so par oo........arr pay nay mal naw.........!!!!
sumaylay on Sep 10, 2010
aso kg ..athan kg tae sis maythingyan si ko pyan lar lal twar par tal shin...sing more song naw sis arr pay nay par tal
naymin15 on Sep 10, 2010
melvinvampire12 on Sep 9, 2010
sister ya , i mar ka 3account shi thar. i ka perium plan ma lote9lo lay.. lote tou lote9bar tha. how to do ma ti lo bar.. i ya song twe ka the mar amyar gyi ba.. but i sing alot of L sai zi as she is my sister.. tu ka i ya sister lay . tu aku America mar myanmar pe mar ma hote bu. tu ya phone lo chin yin pyaw po. pay ma lay.. see u thks to come and see my video
LOVELYMAN on Sep 9, 2010
လာလည်သွားတာ ကျေးဇူးပါ မမေသင်္ကြန်.....မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ အသံလေးနဲ့ အမြဲ မင်္ဂလာရှိနေသော မမေသင်္ကြန် ဆီ ပြန်လည်လာရောက်ကြောင်းပါ.
emovampire on Sep 9, 2010
hi sister, u song twe la kg thar pa.. i ko ba kg tha lo pyaw nay thar... twe pe naw..
yarthiudu on Sep 8, 2010
အသံချိုချိုလေးနဲ့ မမ မေသင်္ကြန် ဆီ လာလည်သွားတယ်နော်....
paradise on Sep 7, 2010
မမေရေ....အလည်လာသွားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါနော်.....အမြဲသီချင်းအစမှာ မင်္ဂလာပါဆိုတဲ့ အသံလေးနဲ့ သီချင်းလေးတွေကို အကောင်းဆုံးဆိုတတ်တဲ့....မမေရေ....အားပေးနေပါတယ်....း))
NayYanThaw on Sep 7, 2010
yellownavy on Sep 3, 2010
Hi May, Thanks so much for visiting my channel. Have fun singing! ~~~ Yellow
kongsithuhtet20 on Aug 31, 2010
I was visit your site and listen your songs.every songs is perfect.sing more song.nice to listen.
thuratz on Aug 25, 2010
doneti on Aug 23, 2010
လာလည်သွားပါတယ်ဗျို့... ခုလို အသိတစ်ယောက်တိုးတာ အများကြီး ပျော်မိပါတယ်... :)
SKB on Jul 5, 2010
လည်လည်လာသွားပါတယ်ခင်ဗျာ အဆိုတော် အသစ်လေး ထင်ပါရဲ့အားပေးသွားတယ်နော် သီချင်းတွေ အများကြီးဆိုပြီး ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဘ၀ ကို ဖြတ်လှမ်းနိုင်ပါစေ
u4gyi on Jul 5, 2010
Ma Ma Maythingyan,,, than ayann kg lo ar pay nay ber del byar.. *** sing more songs in SFY
View All Recordings of maythingan